Discos kacha mma, klọb na mmanya na Asia | Akụkọ Njem
Discos kacha mma, klọb na mmanya na Asia (Nkebi 1)
Njem Asia | | China, Hong Kong, Oge ntụrụndụ, Peking, Osimiri, Shanghai, Singapore, Asia njem
Nọmalị mgbe anyị na-eche nke ime njem Asia Ọ na-abata n'uche, na-eleta mausoleums, omenala oge ochie, okpukpe okpukpe, uka njem uka, paradisiacal osimiri, gastronomy dị iche, na ọbụna teknụzụ dị elu. Otú ọ dị, nke ahụ abụghị nanị ihe mba dị ebube nke Far East na-enye. Oge nke a anyị ekpebiela ịkwadebe nduzi njem dị iche, n'ịchọ ndụ ọchị abalị. You dịla njikere ịgagharị ihe kacha mma, klọb na ụlọ mmanya na Asia? Anyị agaba…
Foto: Farzọ Ọrụ
Abalị abalị enweghị ihe ọ bụla ga-emere nnukwu ụlọ ịgba egwu abalị. New York o Ibiza. Asia nwere ihe ya, ndi ya mara ka ekporiwe nke oma. Ọtụtụ ndị weere dị ka otu n'ime ndị kasị mma Asia klọb anyị na-ahụ “Worldwa nke Suzie Wong”, Aha na-atọ ọchị maka ụlọ ịgba egwu abalị. Ọfọn, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ebe a mgbe ahụ anyị ga-agarịrị Beijingna China. Ebe a, nke ndị obodo na-agakarị, pụrụ iche ị haveụ mmanya mgbe ọrụ ụbọchị siri ike. Ọ bụ eziokwu, anyị dị ka ndị njem nleta agaghị aga ịchọ izu ike mgbe ọfịs gachara. Agbanyeghị, ọ bụ ezigbo nhọrọ iji nọrọ oge obi ụtọ. Ga-enwe mmasị ịmara, ọ bụrụ na ị bụ nwanyị, na Wednesde ọ bụ ụmụ nwanyị abalị ruo elekere 11 nke abalị, yabụ anaghị anabata ntinye nwoke ruo oge ahụ.
Anyị na-aga n'ihu na-agagharị n'ókèala ndị China ma na-akwaga Shanghai. Ebe anyị ga-enwe na Klọ Ndụ Klọ nke nkume kacha mma na China. Ọ bụrụ n ’ịbụ onye hụrụ egwu n’anya na-achọ ụda ọhụụ, mgbe ahụ ebe a zuru oke iji mara nke kacha mma na ndị otu egwu. Na-achọ ụfọdụ fun na Hong Kong? Clọ oriri na ọ nightụ nightụ abalị ndị kachasị atụ aro ebe a bụ C Club, Q Club (ọ na-enye ndị DJ mba ụwa egwu egwu), Hei Hei Club na Flying Club. Nke ikpeazụ a bụ otu n'ime ndị kachasị na mpaghara ahụ, otu maka ndị otu naanị ma ọ bụ ndị onye ọrụ ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama bụ France kere eke France kere. Okwesiri ikwusi Anya Anya, ọgbakọ a na - ekewaghị ekewa, ndị na - eme ihe nkiri na ndị na - agụ egwu mba bịara. You maraworị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbịaru ọdụ ụgbọelu China ị ga-abịa ebe a.
Photo: kev / efu en Flickr
Amata dị ka otu n'ime klọb kacha mma n'ụwa, Ozi Uda, nwekwara ọnọdụ na Asia, kpomkwem Singapore. Akwadoro nke ọma maka ndị na-amasị egwu kọmputa. Singapore na-aga n'ihu na-eju anyị anya site na abalị ya na-ewebata anyị na ebe ndị ọzọ dịka Ogige & Embargo y akwuru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Discos kacha mma, klọb na mmanya na Asia (Nkebi 1)
Milan, isi obodo ejiji (Ia)
Pacasmayo: Osimiri, omenala na ebili mmiri